Maxaa Cusub – Page 5 – Shabakadda Amiirnuur
Alshabaab oo soo bandhigtay Meydadka askarta DF iyo hub ay ka furtatay.
Xarakada ShababauL Mujaahidiin ayaa Maanta soo bandhigtay Meydadka Askar ka tirsanaa Dowladda Federaalka ah oo ay shalay ku laysay Deegaanak Bacaadweyne ee Gobalka Mudug. ugu yaraan 53 askeri ayaa federaalka looga dilay dagaalka waxaana laga qabsaday lix gaari iyadoo mid kalena laga gubay waxaase la soo bandhigay sawirada Shan gaari […]
Weeraro culus ayaa markale lagu qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin Koonfurta dalka Soomaaliya. Xoogag jihaadi ah ayaa xalay weeraro culus ku miray dhowr saldhig oo kuyaal gobollada Jubbada hoose iyo Sh/hoose oo kamid ah meelaha ugu daran ee uu ka socdo halganka ka dhanka ah shisheeyaha soo […]
Weeraro hor leh oo Alshabaab qaaday iyo dilal iyo qarax
Ciidamada Xarakada Shababaul Mujaahidiin ayaa xalay qaaday weeraro ka dhan ah Ciidamada Shisheeye ee ku sugan Gobalada Dalka qaarkood. Diryaanka hubka ayaa xalay laga maqlay deegaanada Mashallaayo iyo Danow ee Gobalka shabeelaha hoose. Sidoo kale weerar ayaa ka dhacay Janaale oo ay wada joogaan Ciidamada Shisheeye iyo kuwa Dowladda Federaalka […]
Sarkaal Sare oo Federalaka ka tirsan oo Qarax lala beegsaday
Qarax ayaa saaka Magaalaa Muqdisho lagula beegsaday Sarkaal ka tirsan Dowladda Federaalka ah. Maareyeeyaha Dekedda Muqdisho Axmad washington oo hadafku in la dilo ahaa ayaa la sheegayaa in uu bad baaday laakiin khasaare kale ayaa goobta ka dhashay. xog aan helnay waxay sheegeysaa in ugu yaraan laba askeri oo […]
Wasiirka Dagaalka ee Maraykanka oo Muqdisho dhuumasho ku yimid
sii hayaha Xilka wasiirka Dagaalka Dowladda Maraykanka Christopher Miller ayaa shalay safar dhuumasho ah oo aan la sii shaacin ku yimid Muqdisho. Waxa uu ka baqayay in Alshabaab diyaariso weerar asiga ka dhan ah haddii maclumaadka safarkiisa kus aabsanu baxo taas ayaana keentay in la qariyo imaanshihiisa. Wasiirka ayaa la […]
Wargeystay newyork times ee ka soo baxa Dalka Maraykanka aya daabacay in Sarkaal Maraykan ah si gaar ahna uga tirsanaa Saraakiisha Sirdoonka Dalkaas lagu dilay Gudaha Soomaaliya. Ilaa iminka lama shaacin Magaca sarkaalkaan hase ahaatee waxaa la sheegayaa in gudaha Dalka Maraykanka loogu samey doono astaan lagu xasuusto iyadoo magaciis […]
Ciidamada Amniga ee Gobalka Hiiraan ayaaa soo qabtya oo Xasbiga dhigay Nin Xaday qori kaara biin ah iyo tobaan xabo oo Rasaas ah. Maxkamadda waxaa tegay Milkiilihii qoriga qaatay oo sheegay Nin Tuugu Gurigiisa u soo dhacay kadibna uu hubka u yiil qaatay. Maxkamadda Shareecada Gobalka Hiiraan ayaa Tuuga ku […]
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Xalay weeraro ku qaaday saldhigyo kala duwan oo ay degan yihiin qaarka mid ah Ciidamada shisheeye iyo kuwo ka tirsan Maamulada Soomaalida ah ee Shisheeyaha la shaqeeya. Ilaa sagaal goobood oo ah dhufeyso aad loo ilaaliyo ayaa lala beegsaday weeraro qorsheysan waxaana la maqlayay diryaanka […]
Bulshada Soomaalida ayaa aad ah u hadal haysa Colaada ka curatay gudaha Itoobiya ee Sababtay in ay dad badan iska layso kuwa kalena dhaawacmaan tira aad u badana ay barakacaan. Marka laga soo tago intaa uurka ka bugta Soomaalida fayow ayaa ku faraxsan jabka Itoobiya iyo dhibaatada ay isu geysanayso […]
12 askeri oo Soomaali ah kana tirsanaa Ciidamada Shirikadda Bankaraaf ee Maraykanku leeyahay ayaa shalay ku le’day qaraxyo ka dhacay Duleedka Garoonka Diyaaradaha ee Balli Doogle ee Gobalka Shabeelaha hoose kadib markii gaadiidki ay saarnaayeen qaraxyo la kaceen. Waxaa la aaminsan yahay in dhimashada faraha badan ka sokow ay jiraan […]